एमाले उपाध्यक्ष रावल भन्छन–‘मोर्चाको आन्दोलनले चुनाव रोकिँदैन्’ - Everest Dainik - News from Nepal
एमाले उपाध्यक्ष रावल भन्छन–‘मोर्चाको आन्दोलनले चुनाव रोकिँदैन्’
काठमाडौं, वैशाख ३ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले मधेसी मोर्चाको आन्दोलनले चुनाव नरोकिने दाबी गरेका छन् । आइतबार रिपोटर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उपाध्यक्ष रावलले चुनाव लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण चरण भएकोले तोकिएकै मितिमा एकै चरणमा निर्वाचन हुनुपर्ने बताए ।
याे पनि पढ्नुस भीम रावलको कविताः ‘के थियो हिजो, के भयो आज’
उहाँले मधेसी मोर्चा सम्मिलित संघीय गठबन्धनले घोषणा गरेको आन्दोलनले देशको कुनै पनि भूभागमा निर्वाचन नरोकिने समेत दाबी गर्नुभयो । उनले भने– ‘मोर्चाका नेताहरु पनि चुनावमा जान डराउनु हुँदैन्, जनतामा जान किन डराउने ?’
उनले आफ्नो पक्षमा जनता भएको दाबी गर्ने मधसशी मोर्चालाई चुनावमार्फत आफ्नो मत ल्याएर दाबी प्रमाणित गरेर देखाउन चूनौति दिए ।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहेका उपाध्यक्ष रावलले सरकारले मोर्चाको माँग सम्बोधन गर्नको लागि ल्याएको नयाँ संशोधन प्रस्तावलाई मोर्चाले अस्विकार गरिसकेको उल्लेख गरे । ’मोर्चाको लागि ल्याएको प्रस्ताव मोर्चाले अस्विकार गरिसक्यो, के को लागि ल्याइएको हो ? कसको लागि ल्याईएको हो ? हामीले अहिलेसम्म बुझेको छैन् ।’
याे पनि पढ्नुस नेता रावल भन्छन्, ‘सिके राउतसँग प्रचण्डको तुलना हुनै सक्दैन’